Tag Archive for "करेन्ट" - करेन्ट लागेर छ वर्षीया बालिकाको मृत्यु
बैतडीमा करेन्ट लागेर कर्मचारीको मृत्यु
कैलाली । करेन्ट लागेर बैतडीमा विद्युत प्राधिकरणका एक कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा पाटन नगरपालिका ६ का ५५ वर्षीय भानसिंह खत्री छन् । आज बिहान स्थानीय सुर्नयागाडको विद्युतगृहमा फ्युज हाल्न गएका बेला करेन्ट लागेर खत्रीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रहरी निरीक्षक गिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । उनले प्रहरी घटनास्थल पुगिसकेको र अनुसन्धान सुरु गरेको बताए ।... थप पढ्नुहोस्
करेन्ट लागेर नितिश र राजकुमारको मृत्युु !
लहान । सिरहाको छुट्टाछुट्टै स्थानमा करेन्ट लागेर एक बालकसहित दुईको मृत्यु भएको छ । करेन्ट लागेर सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१० निवासी सुरेन्द्र यादवका दुई वर्षीय छोरा नितिशकुमार यादवको मृत्युु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानले जनाएको छ । आफ्नै घरमा खेलिरहेका अवस्थामा मल्टिप्लकबाट करेन्ट लागेर घाइते भएका बालक उपचारका लागि धनगढीस्थित श्रमजीवी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ... थप पढ्नुहोस्
गौशाला । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–५ मा करेन्ट लागेर एक किशोरको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सो नगरपालिकाको बिसनपुर बस्ने मातवर राउतका छोरा १५ वर्षीय रोहित राउत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काले बताए । आफ्नै घरको आँगनमा रहेको पानी तान्ने मोटरमा नुहाउने क्रममा किशोर राउतको विद्युत् चुहावट हुँदा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । करेन्ट ल... थप पढ्नुहोस्
करेन्ट लागेर ट्रक चालकको ज्यान गयो !
नुवाकोट । दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएको दुर्घटनामा दुई चालकको मृत्यु भएको छ । बेलकोटगढी नगरपालिका–७ स्थित गल्छी–देवीघाट सडक खण्डको खाल्टेमा करेण्ट लागेर लिखु गाउँंपालिका – १ बराफेदी घर भएका ३३ वर्षीय ट्रक चालक भरत ढुङ्गानाको मृत्यु भएको होे । पृथ्वी राजमार्गको गल्छीबाट नुवाकोटको त्रिशूलीतर्फ फलामको बाकस बोकेर आउँदै गरेको ना ३ ख ४७६८ नंको ट्रकलाई बिजुलीको तारले छुन लागेपछि ट्रकमाथि छतमा गई तार पन्... थप पढ्नुहोस्
नुवाकोट । ट्रकमाथि लागेको तार हटाउन जाँदा करेन्ट लागेर एक जना चालकको मृत्यु भएको छ । बेलकोटगढी नगरपालिका-७ त्रिशुली-गल्छी सडकमा आज करेन्ट लागेर नुवाकोट लिखु गाउँपालिका-१ बरखेती बस्ने ३५ वर्षीय भरत ढुङगानाको मृत्यु भएको छ । गल्छीबाट त्रिशुलीतर्फ आउँदै गरेको ना।३ ख ४७६८ नम्बरको ट्रकले बिजुलीको तारमा छुन लागेकोले ट्रकमाथि छतमा गई तार पन्छाउने क्रममा करेन्ट लाग्दा चालक ढुङगानाको मृत्यु भएको हो । य... थप पढ्नुहोस्
करेन्ट लागेर ३ बर्षिय बालिकाको मृत्यु
सर्लाही । घरमा टर्च लाईट चार्जबाट निकाल्ने क्रममा करेन्ट लागेर ३ बर्षिय बालिकाको मृत्यु भएको छ । गोडैता नगरपालिका-७ मुस्लिम टोल बस्ने सागीर मंसुरीको छोरी निसोरी खातुनको करेन्ट लागेर आज मृत्यु भएको छ । करेन्ट लागी गम्भीर घाइते भएकी निसोरीलाई उपचारको लागि स्थानीय मेडिकल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।... थप पढ्नुहोस्
बारा । मोटरबाट पानी लगाउने क्रममा करेन्ट लागेर बाराको देवताल गाउँपालिकामा एक जनाको मृत्यु भएको छ । देवताल गाउँपालिका ५ पिपडाडी बस्ने ४५ वर्षीय रामाकान्त चौधर्री पानी लगाउने क्रममा करेन्ट लागेर घाइते भएका थिए । चौधरीलाई उपचारको लागि बीरगंज हेल्थ केयर लगिएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।... थप पढ्नुहोस्
२५ चैत, काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ८ स्थित भाटभटेनी सुपर मार्केटमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ । आज बिहान ४ बजेदेखि शुरु भएको आगलागी झण्डै चार घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक केशवकुमार भट्टराइले जानकारी दिए । सुपरमार्केटको पाँचौँ तलाको इलेक्ट्रोनिक्स कक्षबाट शुरु भएको आगो क्रमशः सबैतिर फैलिएको थियो । आगलागी नियन्त्रणमा बुटवल उपमहानगर... थप पढ्नुहोस्